umlawuli ku 18-08-23
HVAC idinga ungaqiniseka ukuthi uthola imikhiqizo eyikhwalithi kanye service engenakulinganiswa. Air Conditioning yethu contactors futhi udlulisela kuzokusiza HVAC zokulawula.
Zokuhlala kanye Small Imikhiqizo Lebhizinisi
Kusukela ukushintsha stylish nezinyawo, ukuze esebenza kahle control ekhaya izixazululo, fast-ukushaja kagesi amashaja imoto, silethe amazinga amasha emisha kanye lula. Nofuel kuqinisekisa ukuphila ivuliwe ngoba amakhaya namabhizinisi amancane.
imikhiqizo Nofuel Ukhulekela e Amandla elanga ukuze PV inverters, i-PV combiner ibhokisi ukumisa nge DC SPD, 1500V fuse ,, DC Contactos futhi AC Distribution Ibhokisi ezinkulu kusetshenziswe zokuhlala kanye Commercial Rooftop iphrojekthi 10KW ukuba 200KW
Isizukulwane esisha ngokuphelele wesifunda amadlambi, contactors, sindisa udlulisela nomthwalo esebenza ngogesi e osayizi eziyisikhombisa kuze 250 kW ilungele ukusetshenziswa e lwamapulangwe ukufakwa Modular okuyinto isakhiwo iphaneli kulula. Competitive control panel North American emakethe nge UL 508 futhi UL 1077 ukuhlangabezana UL5 ...